သင့်အက်ပလီကေးရှင်းမှအိုင်ဖုန်းမရှိဘဲသီချင်းများကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်နည်း။ | ငါက Mac ပါ
၎င်းသည်စပိန်သို့တရားဝင်တရားဝင်ရောက်ရှိခြင်းမရှိသေးသော်လည်းစည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲနှင့်အခြားကိစ္စများ မှလွဲ၍ မည်သည့်အကြောင်းအရာမျှပြောဆိုခြင်းမရှိပါ Apple စောင့်ကြည့်။ ဒါပေမဲ့ဒါပါ အသုံးချဒီတော့ဒီနေ့မင်းကမင်းရဲ့အနာဂတ်နာရီကနေသီချင်းတွေကိုနားထောင်ဖို့သင်ပေးပါမယ် Apple အဲဒါကိုသင်၏နှင့်တွဲရှိသည်ဖို့မလိုဘဲ iPhone ကို.
1 Apple Watch နှင့်၎င်း၏သိုလှောင်မှု။
1.1 ဂီတကို Apple Watch တွင်ထည့်ပါ
1.2 သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် Bluetooth နားကြပ်တို့ကိုတွဲထားပါ
Apple Watch နှင့်၎င်း၏သိုလှောင်မှု။
သငျသညျကွောငျးသိရ Apple စောင့်ကြည့် ဥပမာအားဖြင့်သင့်အားထည့်သွင်းရန် 6.2 GB မှတ်ဉာဏ်ပါ ၀ င်သည် ဓါတ်ပုံများ နှင့်ဂီတ။ အနိမ့်ဆုံးအဖြစ်အပျက်အတွက်2GB အထိ, ပင်လျှင်သီချင်းတွေကိုနားထောင်နိုင်ဖြစ်ခြင်း iPhone ကို တွဲမထားဘူး သင်၏နားကြပ်များကိုသင်၏ဘလူးတုနားကြပ်ဖြင့်နားထောင်လိုပါကအောက်ပါအဆင့်များကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
ဂီတကို Apple Watch တွင်ထည့်ပါ
တေးဂီတကိုထည့်ရန် Apple စောင့်ကြည့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘဲ iPhone ကို ပထမတစ်ခုကိုသင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ playlist:
ဖွင့်ပါ Apple Watch app သင့်ရဲ့ iPhone ကို
တေးသီချင်းရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏အတွင်းရှိဂီတစာရင်းများကိုဝင်ရောက်ရန် "ထပ်တူပြုစာရင်း" ကိုဖွင့်ပါ iPhone ကို သင်လိုချင်သောအရာကိုရွေးပါ။
ထားပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ စည်းညှိခြင်းကိုစတင်ရန် charger ကိုအပေါ်။ အကယ်၍ သူ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ charger ကိုတပ်ဆင်မထားဘူး၊
သင်ရွေးချယ်လိုသောသီချင်းအရေအတွက်သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်မည့်အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်၍ သင်၏စာရင်း၏ကန့်သတ်ချက်ကိုဤနေရာမှသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်စရာများမှာ 100MB, 500MB, 1.0GB သို့မဟုတ် 2.0GB; 15, 50, 125 သို့မဟုတ် 250 သီချင်းတွေကို။ သင်ထည့်သွင်းထားသောစာရင်းများကိုဖျက်လိုပါကစာရင်းများကိုထပ်တူပြုရန်တောင်းဆိုသည့်အခါ“ အဘယ်သူမျှမ” ကိုရွေးချယ်ရမည်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့! ငါ၌ငါ့သီချင်းတွေရှိပြီးသားငါနှင့်သူတို့နှင့်နားထောင်ချင်တယ် iPhone ကို ငါဘက်ထရီကုန်သွားပြီ တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုသည်သာဖြစ်သည် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘဲ iPhone ကိုဒါကနည်းပညာကိုသုံးတဲ့ခမောက်တွေပေါ့ ဘလူးတုသ်.
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် Bluetooth နားကြပ်တို့ကိုတွဲထားပါ
သင်သည်သင်၏လင့်ခ်မထားဘူးဆိုရင် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ သင်၏နားကြပ်ဖြင့် iPhone ဖြင့်သာသီချင်းဖွင့်နိုင်သည်။ သင်၏နားကြပ်များကို တွဲ၍ ကြည့်ရှုရန်၊ ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဖွင့်ချိန်ညှိချက်များ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ နှင့် Bluetooth ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ အားလုံးနီးပါးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အရာအားလုံးအလုပ်မလုပ်မီကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုကျန်သေးသည်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုဖြစ်လိုလျှင် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ တေးဂီတဖွင့်သည့်သင်သင့်လျော်သောရွေးစရာကိုစစ်ဆေးရမည်။ အဲဒါအတွက် -
သင်၏ဂီတအက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ၎င်းကိုဂီတရင်းမြစ်အဖြစ်ရွေးပါ။
မင်းလက်ထဲမှာရှိရင်ပိုကောင်းမယ်၊ မင်းလက်ကောက်ဝတ်မှာရှိရင်မင်းအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Apple Watch
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင့်အက်ပလီကေးရှင်းမှအိုင်ဖုန်းမရှိဘဲသီချင်းများကိုမည်သို့နားထောင်မည်နည်း။
Apple ၏ Mesa, Arizona စက်ရုံသည်မီးလောင်မှုကိုခံစားနေရသည်
Apple မူပိုင်ခွင့်အသစ်က Fusion keyboard ကိုပြသည်